Caalamka:-Dhacdooyinka kufsiga kusoo badanaaya Gobolka Waqooyi Bari ee Dalka Kenya.
Thursday June, 21 2018 - 05:23:26
Tuesday March 06, 2018 - 07:19:43 in by salman abdi
Gabar lix sano jir ah ayaa subaxnimadi isniinta lagu kufsaday Magaalada Garissa iyadoo tani ay kamid tahay dhacdooyinka kufsiga kusoo badanaaya Gobolka Waqooyi Bari ee Dalka Kenya.
Taliyaha bilayska Garissa Aron Moriase ayaa wargeyska Daily Nation uxaqiijiyay in dhacdadan uu ku soo war galiyey Saldhiga bilayska Abshir Bishar oo kamid ah ehelada Gabadha yar ee la kufsaday.
Taliyaha Saldhiga bilayska Garissa ayaa sheegay in gabadha yar loo qaaday isbitaalka weyn ee Magalada Garissa si baaritaano loogu sameeyo iyadoo ay socoto baacsiga lagu hayo shaqsigii falkan foosha xun ku kacay.
Qofka gaysty kufsiga ayaa wararku sheegayaan inuu daris la ahaa xaafada ay ku nooleyd Gabadha yar.
Mr Moriase ayaa tilmaamay inay gacanta kusoo dhigi doonaan dambiilaha falkan gaystay maxkamadana ay hor geyn doonaan maadaama uu yahay shaqsi ay yaqaanaan Qoyska Gabadha.
Arintan ayaa timid isbuuc uun kadib markii dhacdo noocan oo kale ah lagasoo wariyey Degmada Habaswein ee ismaamulka Wajir iyadoo gabadha halkaasi lagu kufsaday dhaawaceeda lagu dabiibaayo isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dhacdooyinka kufsiga kadhanka ah gabdhaha yar yar ee kusoo badanaaya gobolka Waqooyi Bari ayaa lagu eedeeyay odoyaasha dhaqanka oo iyagu doonaaya inay qaab Maslaxo ah ku xaliyaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka waqooyi Bari Kenya iyadoo qoysaska dhibanayaashana la siiyo waxooga lacag ah oo yar.
Sidoo kale dhacdooyinkan waxaa lagu edeeynayaa maamulka dawlada degaanadaasi kajira inaysan waxba ka qabanin arintan iyagoo ku booriya dadweynaha in qaab Maslaxo lagu xaliyo dhibaatooyinka kufsiga